Craig ervine | Latest News on Craig-ervine | Breaking Stories and Opinion Articles - Firstpost- Page -2
Heartbreak for Zimbabwe as Sri Lanka register four-wicket win in one-off Test at Colombo
Here are some of the pictures from Sri Lanka's four-wicket win over Zimbabwe in their only Test match in Colombo.
Sri Lanka vs Zimbabwe, one-off Test at Colombo, Day 3: As it happened
Catch the Live score and ball-by-ball commentary from Day 3 of one-off Test between Sri Lanka and Zimbabwe in Colombo.
Earlier in the day, Zimbabwe's innings lasted just 4.4 overs of the morning session as they were bowled out for 356.
It was Craig Ervine's second Test ton in the 12th match of his seven-year-old international career.
Sri Lanka vs Zimbabwe, 5th ODI: Visitors humiliate former World champions to clinch the series 3-2
Catch the best moments from the fifth one-day international between Sri Lanka and Zimbabwe.
Sri Lanka vs Zimbabwe, 4th ODI: Craig Ervine guides tourists to 4-wicket victory in rain-curtailed match
Chasing a Duckworth-Lewis revised target of 219 in 31 overs, Zimbabwe rode on Ervine's 55-ball unbeaten knock to win with 10 balls to spare at the Mahinda Rajapaksa International Stadium.
Craig Ervine, Solomon Mire inspire Zimbabwe to series-levelling win over Sri Lanka in 4th ODI
Catch the best moments from the fourth one-day International between Sri Lanka and Zimbabwe.
Sri Lanka vs Zimbabwe: Rangana Herath’s record-breaking run leads clean sweep of hosts
Spinner Rangana Herath thrived as Sri Lanka's stand-in captain, taking 8-63 to seal a 257-run win over Zimbabwe in the second Test on Thursday and a 2-0 series sweep.
Zimbabwe vs Sri Lanka: Brian Chari, Craig Ervine lead hosts' fightback
An unbroken century stand between Brian Chari and Craig Ervine gave Zimbabwe a solid start after Asela Gunaratne’s maiden Test hundred had carried Sri Lanka to 504 on the second day of the second Test at Harare Sports Club.
Ish Sodhi shines as New Zealand clinch series against Zimbabwe
Ish Sodhi finished with seven wickets in the match as New Zealand wrapped up a 254-run victory over Zimbabwe in the second Test on Wednesday to sweep the series 2-0.
Craig Ervine's maiden Test ton leads Zimbabwe's fightback against New Zealand
Craig Ervine’s maiden Test century allowed Zimbabwe to enjoy their best period of a difficult series, as they held New Zealand’s bowlers at bay for much of the third day of the second Test.
Ervine's maiden century helps Zimbabwe stun New Zealand
Craig Ervine's maiden century upstaged Ross Taylor and Kane Williamson’s record-breaking exploits as Zimbabwe stunned New Zealand by seven wickets in the first one-day international at Harare Sports Club on Sunday.
UAE vs Zimbabwe Tweet report: 'Zimbabwe, as lucky as Ishant Sharma'
Tweet report of the World Cup match between UAE and Zimbabwe at Saxton Oval.